Candy Crush Level 410 Cheats uye Tips - Pipi Crush Game - Free Lives Tips Cheats Hints
You are here: Home / Pipi Crush Kubiridzira / Candy Crush Level 410 Cheats uye Tips
Last updated on Nyamavhuvhu 10, 2021 By Isobella Franks Leave a Comment
Zvakaoma Pipi Crush mazinga anonaka kwete vese vanonakidzwa. Asi kune avo vanoita saizvozvo, tine chokwadi kuti kune akawanda mazinga mavanogona kuve nemufaro uyu. Kunyangwe paine kunetseka kwakasimba uye kwakaomarara kwakakomberedza iwo mazinga akaperekedzwa nekusaziva kupururudza uye kupopota, kutsvetera Smartphone uye kuiongorora gare gare kune chero kukuvara, zvichiri kunakidzwa kusvika pamwero mukuru. Kugadzirisa imwe yakadai nhanho, isu tinopa Pipi Crush Chikamu 410 Cheats uye Tips.
MaJellies vavengi vepasirose veCandy Crush vatambi. Inodaidzwa jellies, chando, nezvimwe zvinhu zvakawanda, anogara achiiswa muzvikamu zvinangwa kana aripo. Chii chinoita kuti zvinyanye kuoma kana chimiro cheiyo nhanho chisingasviki makona uye zvimwe zvipingamupinyi zvinoita kuti zvinhu zvirambe zvichinakidza '.
Chinangwa chemazinga 410 iri nyore kutaura. Bvisa zvese 70 jellies uye mucherechedzo 150,000 pfungwa; zvese izvi mukati 50 unotii. Kunyangwe huwandu hwekufambisa hwakanyanya kukwirira, kune mabhomba ne 30 inofamba margin uye chokoreti inogadzira pasi iyo inoita kuti iyi iite seinonakidza nhanho pane kurara.
Candy Crush Level 410 Cheats uye Tips:
Hapana chikonzero chekupokana, sezvatichazvishandura. Tevedza aya matipi akapusa uye manomano kujekesa nhanho iyi, uye usatya kupa mashoma. Tine zvakawanda zvekudzidza kubva mukukanganisa kwedu zvakare. Saka, pasina imwezve ado, ngatipfuurei:
Kutanga chinhu kutanga, chengeta ziso pamatanho pazasi pane kumusoro. Kwete izvi chete zvinokugonesa kuita sarudzo dziri nani asi zvakare kukubvumidza kuti uite zvakakosha mapipi iwe aunowana, chinhu chakakoswa pane ino nhanho.
Iwe unazvo chete 30 inofamba mabhomba asati aputika, saka ita chokwadi chekuvabvisa kutanga. Unogona kuvayambuka nemapipi enguva dzose pazvinogoneka, kana iwe unogona kushandisa yakakosha makenduru pamwe chete kuti ubudise maswiti mazhinji pamwe nejellies kamwechete.
Chisarudzo chako chakanakisa ndechekuita kuti iyo kuyerera katatu kusanganisa kuve kwakanyanya kukanganisa, izvi zvinosanganisira kuyambuka bhomba remavara rine mitsetse kana rakarukwa pipi, kuyambuka mabhomba maviri orudzi pamwe chete, kana kuyambuka pipi rine mitsetse neanga rakarukwa. Izvi zvinokugonesa kuti utore akawanda jellies pamwe nemabhomba ari pakaoma kusvika makona.
Rangarira iye wekugadzira chokoreti pasi? Zvakanaka, icharamba ichigadzira chokoreti mudanho rese. Ive neshuwa yekuchengeta ichipuka chokoreti nguva nenguva kana ichakura isingaonekwe uye iite kuti ive yakaoma kugadzira mapipi akakosha. Inogona zvakare kumedza rakakosha pipi, kukurasa zvachose.
Pakupedzisira, kune avo akaoma kusvika makona, yako yakanakira sarudzo ndeyokugadzira uye kushandisa mapundu akakosha mumusanganiswa kutora jisi munzvimbo idzo. Vatambi vanowanzo kugona kubvisa zviyero zvese asi zvakasununguka nekuda kwejellies mumakona.
Izvo zviri zvese nezve kuronga mafambiro ako kurudyi uye kutarisira mhedzisiro yeaya anofamba pane zvakatenderedza. Ndokuonai imi vanotevera nguva; kusvika ipapo, gara zvinotapira!!!